Taliyaha AFRICOM oo sheegay in ciidan dhimista Mareykanka ee Afrika aysan saameyn ku yeelan doonin Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTaliyaha AFRICOM oo sheegay in ciidan dhimista Mareykanka ee Afrika aysan saameyn ku yeelan doonin Soomaaliya
March 8, 2019 Abdi Omar Bile Somalia 0
Washington-(Puntland Mirror) Ciidan dhimista qorsheysan ee qaarada Afrika saameyn kuma yeelan doonto howlgalada argagixiso la dirirka Soomaaliya, halkaasoo Mareykanku ay ka fuliyaan duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab, sida uu Aqalka Congress-ka u sheegay taliyaha Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM).
Taliyaha Taliska Mareykanka ee Afrika Janaraal Thomas D. Waldhauser, ayaa sheegay in 300 la dhimi doono ciidamadda Mareykanka ee ku sugan Afrika bisha June ee sanadka 2020, wajiga kowaad ee dhimista oo ah 10 boqolkiiba. Balse waxa uu sheegay in uusan hubin haddii wajiga labaad ee dhimista la amri doono.
Waaxda Gaashaandhiga Mareykanka ayaa sheegtay in dhimista ciidamada Mareykanka ee Afrika ay qeyb ka tahay qorsheyaal dib loogu fiirinayo fiiro gaar ah oo ku saabsan tartan xoogleh oo ka yimaada Ruushka iyo Shiinaha. Laakiin dhimista ayaa keentay walaac ka timid xubnaha Aqalka Concress kuwaasoo su’aal ka keenay haddii ay kordhin karto khatarta argagixisada ee qaarada.
Hadda waxaa ku sugan Afrika qiyaastii 6,000 ciidamo Mareykan ah, iyadoo intooda badan oo ka badan 4,000 ay ku suganyihiin saldhiga Mareykanku uu ku leeyahay dalka Jabuuti.
Ku dhawaad 500 ciidamo Mareykan ah ayaa ku sugan Soomaaliya, halkaasoo Mareykanku uu kordhiyay duqeymaha ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab.
Sanadkan, Mareykanka ayaa qaaday 24 duqeymood oo ka dhan ah Al-Shabaab. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in 236 maleeshiyo ah lagu dilay duqeymaha sanadkan. Sidoo kale 338 lagu dilay duqeymo dhacay sanadkii lasoo dhaafay ee 2018.